Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चीनद्वारा ध्वनीको गतिमा उड्ने विमानको सफल परीक्षण – Emountain TV
चीनद्वारा ध्वनीको गतिमा उड्ने विमानको सफल परीक्षण
एजेन्सी, २३ साउन । चीनले आफुलाई माहाशक्ति राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक चीनले तीब्र गतिको हायपर सोनिक हवाई जहाजको सफल परिक्षण गरेको छ ।
चीन, अमेरिका र रुससँग बराबरीको मुकाविला गर्न सक्ने क्षमता बृद्धिमा लागेको छ । साथै आफुलाई महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न विभिन्न परीक्षणहरु पनि गर्दै आएको छ ।
रक्षा क्षेत्रमा शोध र अनुसन्धानका लागि मात्रै १ सय ७५ अर्ब डलर छुट्याएर चीनले थरिथरिका परीक्षण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो सफलता उसले हायपर सोनिक ध्वनि भन्दा तेज रफतारमा उड्ने बिमानको सफल परीक्षण गरेपछि पाएको हो ।
यो बिमान अत्याधुनिक प्रविधिबाट युक्त रहेको जनाइएको छ । विमानले परमाणु हतियारको अतिरिक्त अत्याधुनिक मिसाइल विरोधि रक्षा प्रणाली एण्टी मिसाइल डिफेस्स सिस्टम जडान गरेपछि शक्तिशाली रहेको रक्षा विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।
चीनद्वारा ध्वनीको गतिमा उड्ने विमानको सफल परिक्षण
Posted by Mountain Television on Wednesday, August 8, 2018
चीनको एकेडमी अफ एयरोस्पेस एरोडायनामिक्सका अनुसार यो चीनको पहिलो हायपर सोनिक वेवराइडर हो । यसको प्रथम परीक्षण उडान चीनको अज्ञात परीक्षण केन्द्रबाट गरिएको छ । यो चीनका निम्ति ठुलो सफलता हो ।
हायपर सोनिक विमान रकेटका माध्यमबाट लन्च गरिएको छ । यो विमान चाइना एरोस्पेस साइन्स अफ टेक्नोलोजि कर्पोरेशन र सिएएएसँग गरेर डिजाइन गरिएको हो । चिनले यस अघि धेरै प्रकारका अत्याधुनिक हात हतियारहरु आफ्नो सेनालाई दिएर विश्वको सक्षम सैनिक शक्तिको रुपमा उभ्याएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङले चीनलाई विश्वका सक्षम, आत्मनिर्भर र शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न गरेको प्रयासको परिणाम स्वरुप चिनले रक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्दै अघि बढी रहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा समुद्री चक्रवात इडाईले एक लाख बढीको मृत्यु, २५ लाख प्रभावित